HFE Poisonless နှင့်တိကျဘို့အန္တရာယ်ကင်းဆပ်ပြာ China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ဆပ်ပြာအီလက်ထရောနစ်များအတွက် Poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်း,ဆပ်ပြာအီလက်ထရောနစ်များအတွက် Poisonless,အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက်အန္တရာယ်ကင်းဆပ်ပြာ
Home > ထုတ်ကုန်များ > Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျ > အီလက်ထရောနစ် Precision သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် > HFE Poisonless နှင့်တိကျဘို့အန္တရာယ်ကင်းဆပ်ပြာ
2. Hfe Codorless သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာနှင့်လြှပျစစျမီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ရှင်းလင်းနိုင်သည်, နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အာကာသတိုးတက်စေနိုင်တယ်,
3 ။ အရည်ပျော်စေ အလွန်သင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် (54 ℃) နှင့်ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, စစျနိုငျ အတွက်အခန်းကဏ္ဍ ဟာရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအအေးအစိတ်အပိုင်းများ။ အီလက်ထရောနစ် Precision သည်ဖြေရှင်းချက်ပျော်စေဖြစ်ပါတယ် Non-အန္တရာယ် ကုန်ပစ္စည်းများ , Non-မီးလောင်ရာနှင့် Non-burst, မီးကိုမဒါမှမဟုတ် flash အချက်;
5. Hexafluoropropyl methyl အီဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်တဲ့အဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းမဟုတ်သောဖြစ်ပါသည် - ကိုစိတျဆိုး;
ဆပ်ပြာအီလက်ထရောနစ်များအတွက် Poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်း ဆပ်ပြာအီလက်ထရောနစ်များအတွက် Poisonless အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက်အန္တရာယ်ကင်းဆပ်ပြာ